2010-06-13 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​မေးး​အစ်​ကို​ရေ ​ကျွန်​တော့်​ရဲ့ Antivirus ​က​ဒီ​နေ့​မှာ Expired ​ဖြစ်​သွား​တယ်။ ​အဲ​ဒါ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မှာ​လဲ? ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး ​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ​ဦး​နော်။ Expired ​ဖြစ်​သွား​တဲ့​အ​တွက်​ကြောင့် Virus Scan ​ကို​ထိ​ခိုက်​နိုင် ​ပါ​သ​လား ​ခင်​ဗျား။ ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး ​ဖြေ​ပေး​ပါ။
​ဖြေး​ငါ့​ညီ​ရေ virus scan ​ကို ​မ​ထိ​ခိုက်​ပါ​ဘူး . ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ငါ့​ညီ update ​မ​လုပ်​တော့​နဲ့ ​ရက်​ရဲ့ ​နောက်​ပိုင်း​မှာ ​ထွက်​တဲ့ virus ​အ​သစ်​တွေ​ကို​တော့ ​သတ်​နိုင်​တော့​မှာ ​မ​ဟုတ်​တော့​ပါ​ဘူး . ​ဒါ​နဲ့ ​ငါ့​ညီ​ရဲ့ antivirus program ​က​ဘာ​လဲ . ​အဲ့​လို​ပြော​နိုင်​ရင် ​အစ်​ကို့​အ​နေ​နဲ့ ​ငါ့​ညီ Expire ​ဖြစ်​သွား​တဲ့ antivirus program ​အ​တွက် ​ကူ​ညီ​ပေး​လို့ ​ရ​ပါ​တယ် . ​အ​ခု ​ငါ့​ညီ ​အ​မေး​ကို​ပဲ ​ပြန်​ဖြေ​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် .
​မေးးkosoeး​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​ရေ ​ညီ​လေး​ကို (super proxy helper 1.5) application ​တင်​ပေး​ပါ ​ခင်​ဗျား
​ဖြေး​အစ်​ကို​ရေ့ ​ဒီ​မှာ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ . version ​က​တော့ 1.0 ​ပါ .
​မေးးWindows7​က genuine ​မ​ဖြစ် ​တော့ ​လို့ ​အ​ကို ​တင်​ပေး​ထား​တဲ့ windows7loader 1.8 ​နဲ့ ​က ​မ ​ရ ​တော့ ​လို့ ​ဘာ​နဲ့​ရ ​ဦး​မ​လဲ ​မ​သိ​လို့ windows ​က​အ ​စ​က ​ဘာ ​မှ ​ဖြစ် ​ဘူး ​ဗျ ​ကျ ​နော် ​က window ​ကို update ​လိုက်​လို့ ​ဖြစ် ​သွား ​တာ, ​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး ​ဗျာ . ​နဲ​နဲ​လေး​အ​ရေး​ကြီး​နေ​လို့​ပါ .
​ဖြေး​ကျွန်​တော် ​စ​ပြီး​တော့ ​တင်​ပေး​က​တည်း​က Update ​မ​လုပ်​ဖို့ ​အ​တန်​တန် ​ကြို​မှာ​ထား​ပါ​တယ် . ​အာ​လဲ ​ပေါက်​နေ​ပါ​ပြီ . update ​လုပ်​လိုက်​တော့​ကော ​ဘာ​တွေ​များ ​တစ်​အား​ကောင်း ​သွား​မှာ​လဲ . ​ဘာ​လို့ update ​လုပ်​ချင်​ရ​တာ​လဲ ​ဆို​တာ​ကို​တော့ ​ကျွန်​တော် ​မ​သိ​ပါ​ဘူး . ​အ​ကောင်း​ဆုံး​က​တော့ File ​တွေ​ကို Backup ​လုပ်​ပြီး​တော့ window7​ကို ​ပြန်​ပြီး​တော့ ​တင်​သုံး​လိုက်​ပါ . ​နောက်​ပိုင်း update ​လုပ်​ချင်​တဲ့​သူ​များ ​တစ်​အား​ကို update ​လုပ်​ချင်​နေ​တယ်​ဆို​ရင် ​ဘယ်​ရက်​က​နေ ​ဘယ်​ရက်​အ​တွင်း update ​လုပ်​သင့်​တယ်​ဆို​တာ​ကို ​ပြော​ပြ​ပါ့​မယ်. ​ကျန်​တဲ့​ရက်​မှာ ​သွား​လုပ်​ရင်​တော့ ​အဲ့​လို​ပဲ ​ဖြစ်​မှာ​ပါ​ပဲ . ​လ​မ​ကုန်​ခင် (၁၀)​ရက်​အ​လို​နှင့် ​လ​ကုန်​ပြီး (10 ​ရက်)​အ​တွင်း ​ဘယ်​တော့​မှ update ​မ​လုပ်​မိ​ပါ​စေ​နဲ့ .